က Tiger Woods Jokes: အဆိုပါကောင်း, The Bad နှင့်ရုပ်ဆိုး
က Tiger Woods ဟာသ
ကျားများကအတုယူ Guffaws နှင့် Groaners
အများစုက က Tiger Woods ဒီရက်နှောင်းပိုင်းတွင် 2009 ခုနှစ်စတင်မဝုဒ် '' ကားတစ်စီးမတော်တဆမှုနှင့် cheat အရှုပ်တော်ပုံ၏နောက်ဆက်တွဲပေါ်ပေါက်လာကြောင်းတဦးတည်းသဘောထားပြင်းထန်သို့သော်မဟုတ်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်များမှာ jokes!
တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွက်ပိုရှည်အပိုင်းပိုင်း၏စုံတွဲတစ်တွဲ ဂေါက်သီး Jokes အပိုင်းကျားပါဝငျသညျ။
အပေါ်ကနှစ်ခုပြက်လုံးအပြင်, ငါတို့သည်လည်းသင်နှင့်အတူဂေါက်သီးဖုံးအုပ်၌အကြှနျုပျတို့၏ proudest အချိန်လေးထဲကတစ်ခုဝေမျှရမယ်, အမည်ရဆောင်းပါး, " farted ဘယ်သူနည်းကက Tiger Woods ခဲ့သလား
ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့က Tiger Woods ၏စဉ်းစားသောအခါ, ရဲ့ကရင်ဆိုင်ရပါစေကျွန်တော်တို့ရဲ့အတှေးအအများစုသည်အရှုပ်တော်ပုံအကြောင်းကို quips မှဖွင့်ယနေ့ jokes ။
မေး: က Tiger Woods ကိုသင့် Cadillac Escalade ကားမောင်းထက်ပိုဆိုးဘာလဲ?
ဖြေ ShotGun စီးနင်း Dick Cheney ။
Q: သင် "ကျား-သက်သေ" ဟုဂေါက်ကွင်းကြသနည်း
သူကသူ့အိမ်အပြင်ဘက်မီးဘုံပိုင်သို့မိမိအ SUV ကားပျက်ကျပြီးနောက်နှောင်းပိုင်း-ညဥ့်ဟောပြောပွဲပြပွဲကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်နှောင်းပိုင်း 2009 ခုနှစ်နှင့် 2010 ခုနှစ်သို့ဝုဒ် '' ဒုက္ခနှင့်အတူလယ်နေ့ရက်ကိုရ၏ ဝုဒ် '' အများအပြားစွပ်စွဲ extramarital ရေးရာနှင့် ပတ်သက်. ဗျာဒိတ်တော်များကိုအလင်းဆီသို့ရောက် လာ. , ပြီးနောက်, မိမိအခွဲခြာနှင့်ထံမှထို့နောက်ကွာရှင်းပြီးနောက် အတှကျလညျး Nordegren ။
ဒံယလေသ Kurtzman ထိုခေတ်ကာလကနေကျား ပတ်သက်. အကောင်းဆုံးနှောင်းပိုင်းတွင်-ညဥ့် Funny အချို့ကိုပြုစု။ ဤတွင်ကျွန်မအကြိုက်ဆုံးသုံးခုကပြောသည်သူအပေါင်းတို့သည် Conan O 'Brien :
"တိုက်ဂါးဝုဒ်နှင့်နီးစပ်သောသတင်းရပ်ကွက်များကသူသည်ယခုအခါသီးနှံအစာစားခြင်းနှင့်ကာတွန်းများကိုကြည့်လက်ထက်တော်ဖြုန်းရဲ့ပြောကြပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့်က Tiger Woods အသီးအသီးရဲ့စိတ်ကူးယဉ်ဘဝအသကျရှငျကနေအသီးအသီးရဲ့အစစ်အမှန်ဘဝအသကျရှငျသွားပြီ။ "
"နောက်ထပ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးက Tiger Woods ချိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးဒီတစ်ခုက 48 နှစ်သမီးအရွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ကျား, သူမ၏ရည်ညွှန်းအဖြစ် 'ငါ့အကြီးတန်းခရီးစဉ်။ '"
"တစ်ဦးကလေ့လာမှုအသစ်မှန်မှန်တီဗီကိုကြည့်တဲ့သူကလေးတွေ၏ 86 ရာခိုင်နှုန်းကိုက Tiger Woods ကိုအသိအမှတ်မပြုနိုင်ပါဘူး။ သဘာဝကျပါတယ်ဘယ်သူကိုသူတို့အဖေဖြစ်နိုင်သည်ကြောင့်အကပြောပါတယ်။ "
ဒီမှာစတီဖင် Colbert ထံမှတဦးတည်းရဲ့: "ကျားအမြဲ 110 ရာခိုင်နှုန်းကိုပေးသည်။
သူကသူ့ဇနီးမှ 100 ရာခိုင်နှုန်းပေးနေတုန်းပဲမိမိအစွပ်စွဲမြှောင်အဘို့ကျန်ကြွင်း 10 ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်၏။ "
အဆိုပါအစောပိုင်း (နှင့်မကြာခဏ) တစျကှနျ့
ဝုဒ် '' ပြည်တွင်းကိုဒုက္ခအကြောင်းကိုဟာသနီးပါးအဖြစ်မကြာမီ extramarital ရေးရာနှင့်ပတ်သက်ပြီးသူ့ကားလေယာဉ်ပျက်ကျမှုနှင့်စွပ်စွဲချက်နှင့် ပတ်သက်. သတင်းပြုသကဲ့သို့ထိုကျည်အောင်စတင်ခဲ့သည်။
ရဲသူမကသူ့ကိုဝင်တိုက်ဘယ်လိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာကျား၏ဇနီးကိုမေးခဲ့တယ်။ "ရုံ 5. အဘို့အကြှနျုပျကိုချ" အတှကျလညျးကပြောပါတယ်, "ငါမှတ်မိလို့မရပါဘူး"
ping အတှကျလညျးဟုချေါသံအသစ်တစ်စုံရှိပါတယ်။ သူတို့ကသင်နှင့်အတူကျားရိုက်နှက်နိုင်ပါတယ်ကလပ်ပါပဲ။
က Tiger Woods ကလေးတံဆိပျမြားနှငျ့ဘုံတှငျအဘယျရှိသနည်း သူတို့ကနှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးနျောတို့က clubbed ခဲ့ကြရတယ်။ (ဟုတ်ပါတယ်, အတှကျလညျးအမှန်တကယ်ဆွီဒင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ကဗြာဆနျလိုငျစငျပြက်လုံးအတွက်ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ )
သငျသညျကျား Cheetah မှသူ၏နာမကိုပြောင်းလဲစကားကိုနားထောငျခဲ့သလား
သငျသညျ Nike ကအသစ်ဆောင်ပုဒ်ကိုနားထောငျခဲ့သလား ရုံငါ့ကိုလုပ်ပါ။
က Tiger Woods နှင့်စန်တာအပိုဒ်များအကြားကွာခြားချက်ကဘာလဲ? စန်တာသုံး ho ရဲ့မှာတော့ဘူး။
ကားတစ်စီးနှင့်တစ်ဦးဂေါက်သီးဘောလုံးကိုအကြားကွာခြားချက်ကဘာလဲ? ကျားတစ်ဦးဂေါက်သီးဘောလုံးကို 400 ကိုက်မောင်းနိုင်ပါတယ်။
က Tiger Woods ကိုသူစျေးကြီးကားများအမြောက်အမြားပိုင်ဆိုင်နိုင်အောင်ကြွယ်ဝနေသည်။ ယခုသူတဦးတည်းအတွက်အပေါက်တစ်ပေါက်ရှိပါတယ်။
ကျားထွက်လာမယ့်အသစ်တခုရုပ်ရှင်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာဝပျကျား, Hidden ပိုက်ခေါင်းကိုခေါ်ပါတယ်။
Reader ကို-Submitted က Tiger Woods ဟာသ
သင်နှင့်ငါကဲ့သို့သောရှေးရှေး - အထက်ပါအများစုဟာအပျော်တမ်း quipsters မှလာကြ၏။ သို့ပြန်သွားရန်ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးသောဤပြက်လုံးအချို့ကိုပြုစုတဲ့အခါမှာ - 2009 ခုနှစ်နှင့် 2010 ခုနှစ် - ငါတို့သည်စာရင်းထဲမှမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ပြက်လုံးကိုထည့်သွင်းဖို့စာဖတ်သူတွေဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ (ဝမ်းနည်းပါတယ်, သငျသညျတော့ဘူးကြောင်းမပွုနိုငျ။ )
အဆိုပါခေါင်းစဉ်ကသတိပေးသည်အတိုင်း, အချို့တော်တော်လေးကောင်းသောဖြစ်ကြပြီးအချို့အလွန်လှပသောမဟုတ်! (ထိုအခါအချို့အစစ်အမှန် groaners ဖြစ်ကြသည်။ ) ထိုအခါသူတို့ကိုအများအပြား - heck, သူတို့ထဲကအများစုဟာ - အလွန်ဆင်းရဲအရသာ၌ရှိကြ၏။ သို့သော် (ထိုစာလုံးစောငျးအမညျကိုသူတို့ဟာသ posted သည့်အခါတစ်ဦးချင်းစီမှတ်ချက်ပေးအားဖြင့်ကျန်ကြွင်းရစ်သောအမည်ဖြင့်ဖြစ်ပါသည်) ရဲ့စာဖတ်သူများနှင့်အတူတက် လာ. အဘယ်အရာကိုမြင်ကြကုန်အံ့:
Matt: ကျား '' ပထမ T နှင့်တစ်ဦးက '' ရန်သူ၏အခြေခံအုတ်မြစ်အမည်ပြောင်းထားသည်
Jill: ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို: တစ် titleist နှင့်တစ်ဦး Escalade အကြားဘာကွာခြားချက်? ဖြေဆို: ကျားတစ်ဦး titleist 400 ကိုက်မောင်းနိုင်ပါတယ်
slobwedge: ကျားကသူ့ညားတပါးကဏန်းကိုပေး၏။ အခုတော့သူမများလွန်းတဲ့ခြစ်ဂေါက်သီးပါပဲ။
ရယ်စရာဟာသ: က Tiger Woods ကိုယနေ့လိင် rehab သို့စစ်တယ်။ တကယ်တော့သူကသုံးသို့ check လုပ်ထားပေမယ့်သူတို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားအကြောင်းကိုမသိရပါဘူး။
Pokrface: က Tiger Woods လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်သူ၏ဇနီးအဘယျသို့ဆိုသနည်း "ငါသည်မိနစ် 30 အတွင်းနေအိမ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ "
ဘရတ်တေလာ: ကျားယခုသူသည်ယခုအခါ 42 ပြည်နယ်များအတွက်အလေ့အကျင့်တရားအားလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်ဒါကြောင့်များစွာသောလူလွဲချော်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။
အဲလက်စ် Julius: သင်၏လိင်ဘဝတိုးတက်ကောင်းမွန်မသာသောအသစ်သောမူးယစ်ဆေးထွက်ရှိပါတယ်; ဒါကြောင့်လည်းသင့်ရဲ့ဂေါက်သီးဂိမ်းပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ ဒါဟာ TIAGRA ဟုခေါ်တွင်ပါတယ်။
Mick: ကဖြိုဖျက်ပြီးသေးငယ်တဲ့ကားဂိုဒေါင်အပြင်ဘက်ရပ်တန့်သည့်အခါကျားမိန်းကလေးတို့အကြားကသူ့ Caddy မောင်းနှင်ခဲ့သည်။ သူ ဝင်. သူကကြည့်ယူနိုင်ခဲ့လျှင်အဟောင်းစက်ပြင်မေးတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးစလုံးဟာမော်တာကျော်မြှောင်ခဲ့ကြသည်နှင့်အမျှတစ်ဦးဂေါက်သီး Tee အတွက်မော်တာအဖုံးပေါ်တွင်ကျားရဲ့ရှပ်အင်္ကျီအိတ်ကပ်ထဲကနေလဲလျက်နေ၏။ အဟောင်းစက်ပြင်အဆိုပါ Tee ပြောက်နှင့်ကဘာကိုမေးခဲ့တယ်။ ကျား "ဒါဟာကားမောင်းနေတုန်းပေါ်တွင်သင်၏ဘောလုံးအနားယူဘို့ပါပဲ။ " ဟုစက်ပြင်, replied ထားတဲ့စေရန် "Boy, Cadillac အရာရာစဉ်းစား!"
brando: ဘယ်နှစ်ယောက်ကျားရဲ့ညားကတစ်ဦးအလင်းမီးသီးအပေါ်ဝက်အူမှယူပါသနည်း Fore!
Zach: က Tiger Woods က၎င်း၏ "ဘယ်လိုသင့်ရဲ့ဇနီးသိမရှိရင် 18 Holes အတွက် Get ရန်" ဟုခေါ်သောသစ်ကိုစာအုပ်နှင့်အတူထွက်လာသ
ptz: ဒီတစျခုဂျော့လိုပက်ဇ်အနေဖြင့်တစ်ဦးအဓိကရုဏ်းဖြစ်ပါသည်: "ငါ့ကိုဂေါက်သီးနားလည်မယ်လို့အသုံးအနှုန်းများထဲမှာထားကြပါစို့။ သူမှားအပေါက်ကစားကာ ထား. drive ကိုခဲ့ရပြီးယခုသူမကောင်းတဲ့မုသားထဲကရဖို့တယ်ပါတယ်။ "
LJ: အဘယ်အရာရဲ့က Tiger Woods အကြိုက်ဆုံးသင်တန်း? လိင်ဆက်ဆံမှု !!
ptr: "။ ငါ့အ Favourate 18 တွင်း" ရုံကနောက်ဆုံးက Tiger Woods ကို DVD အပေါ် $ 20 ဖြုန်းကအားလုံးကိုဂေါက်သီးအကြောင်းကိုဖြစ်ခဲ့သည်ထွက်နှစ်မြောက်မွေးနေ့။
ဇူလိုင်လ Inkster: ရေနစ်မြုပ်၏ဂေါက်သီးခန်းမဇီဝ
မေီ Alcott: တစ်ပျံခုန်ပျံကျော်လွှားရရှိခဲ့သူကားအဘယ်သူအဆိုပါဗိုလ်မှူးချန်ပီယံ
Rory McIlroy: အိုင်ယာလန်ရဲ့အကောင်းဆုံးဂေါက်သီးရိုက်အားကစားသမား၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
အဆိုပါပျံ Dutchman ဇာတ်လမ်းအကျဥ်း
အားလုံးအချိန်ထိပ်တန်း 10 လူမှုဘဝသရုပ်ဖော်ဇာတ်လမ်း
ဘယ်လို Febreze လုပ်ငန်းခွင်ပါသလား
နှုတ်ကပတ်တော် '' Epithet '' အဘယျသို့ဆိုလိုသနညျး
Rising လက္ခဏာတွေ: လီယိုမြင့်တက်
သင်က CarMax အကြောင်းသိထားဖို့လို 10 အချက်အလက်